HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbul3 oo ka socda DHMI Airport. Badhanka la riixo si aad ugu soo guurto garoonka diyaaradaha
27 / 10 / 2017 34 Istanbul, tareenka, GUUD, TURKEY
DHMI waxay bilowday qorshe mustaqbal ah ee garoonka Atatürk, kaas oo la filayo in loo isticmaalo hawlihii guud ee duullimaadyada oo la bilaabay garoonka diyaaradaha ee Istanbul.
Iyada oo hawshu socoto Madaarka Caalamiga ah ee Istanbul (INA), oo dhismaha laga dhiso Istanbul iyo boqolkiiba 68 ayaa la dhammeeyaa, Hay'adda Maareynta Maddaarrada ee Dawladda ayaa bilaabay inay diyaariso diyaarinta xiritaanka garoonka Ataturk.
Sida laga soo xigtay Gökhan Artan oo ka tirsan xarunta Habertürk News Centre, DHMI waxay soo gudbineysaa warbixinta iyo qiimeynta go'aaminta helitaanka faa'iido faa'iido leh haddii ay dhacdo in la joojiyo heshiiska kirada ee Atatürk horaantii xilligaas.
Qorshe cusub oo bilaash ah oo lagu furayo 29 OCTOBER 2018
Ujeedadaas, DHMI, Garoonka Diyaaradaha ee Atatürk iyo Meelaha Caalamiga ah iyo Xarumaha Gawaarida ee Gawaarida iyo guud ahaan Duulimaadyada Duulimaadka ee xuquuqda kireysiga ee joojinta qandaraaska kirada horaantii haddii ay dhacdo in la joojiyo warbixinta heshiiska kirada haddii ay dhacdo go'aaminta warbixinta iyo qiimeynta shaqada.
21 Muddada hindisada la qabanayo bisha Diseembar waxaa lagu go'aamiyey bilaha 18 laga bilaabo taariikhda bilawga ganacsiga. Xilliga howlgalka ee garoonka Atatürk, oo ay maamusho TAV, ayaa la qorsheeyay in uu dhaco January 3, halka Maddaarka cusub ee Istanbul la qorsheeyay in uu furo Oktoobar 2021.
Iskusoo duubka Xiriirka Ski-ga ee Daabacaadda Xarunta Daryeelka Ski ee Erzurum
Burcad badeedda oo la daabacay
Degmada Metropolitan Municipality ayaa riixay badhanka tunnel tunnel
Duqa Magaalada Sekmen Pushes Mashruuca Nidaamka Isgaadhsiinta Erzurum
Saxiixa IMM badhanka loogu talagalay 10 khadka tareenka cusub ee Istanbul
Xafiiska Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu hoosta ka xariiqay badhanka Haydarpasa (Video)
IMM Riix Dhiirigelinta Isbitaalka-Imp